ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၁၅ အောင်မြင်မှုများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမျှဝေခြင်း! | Martech Zone
wow ဘာတစ်နှစ်! လူအများစုကငါတို့ရဲ့စာရင်းဇယားကိုကြည့်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်တယ် အုမဲ့…ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တိုးတက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မပျော်နိုင်ပါ။ ဒီဇိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ရာထူးများ၌အရည်အသွေးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ သုတေသနအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းများအားလုံးသည်သိသိသာသာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ ငါတို့ဘတ်ဂျက်မတိုးဘဲ၊ မည်သည့်အသွားအလာကိုမ ၀ ယ်ဘဲအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကအော်ဂဲနစ်ကြီးထွားမှုပဲ!
လွှဲပြောင်းမှု spam ရင်းမြစ်များမှအစည်းအဝေးများကိုချန်လှပ်ထားပါ၊ ၂၀၁၄ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးစာရင်းများ
အစည်းအဝေးများ 14.63% အထိ 728,685 မှ
အော်ဂဲနစ်အသွားအလာ 46.32% အထိ 438,950 မှ
အသုံးပြုသူများသည် 8.17% အထိ 625,764 မှ
စာမျက်နှာအမြင်များ 30.13% အထိ 1,189,333 မှ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှုန်းစာမျက်နှာများ 13.52% အထိ 1.63 မှ
Session သင်တန်းကာလ 4.70% အထိ ၄၆ စက္ကန့်အထိ
ဘောင်းနှုန်း 48.51% ကဆင်း ၃၆.၆၄% သို့
ကဏ္ S အသစ်များ 5.63% ကဆင်း ၃၆.၆၄% သို့
ထပ်မံ၍ …အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရေးအတွက်တစ်ပြားမှမသုံးခဲ့ပါ၊ ဆိုက်ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်နှုန်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အနည်းငယ်အာရုံစိုက်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အီးမေးလ်သတင်းလွှာ၊ စာဖတ်သူများ၊ လူမှုရေးနောက်လိုက်များ၊ ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၊ Podcast နားထောင်သူများနှင့်ဗီဒီယိုလေ့လာသူများထပ်ထည့်ပါ။ ဤစာအုပ်တွင်တစ်နှစ်လျှင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်သန်းကျော်အထိအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်မည်။
နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BlueBridgeကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချန်နယ်များအားလုံးမှအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်သည့်အခါအလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်သည့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီမိုဘိုင်း application ကိုလည်းရရှိထားသည်။
ကျနော်တို့နှင့်အတူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မိတ်ဖက်ရရှိပါသည် ဝက်ဘ်ရေဒီယို၏ Edge Podcast ထုတ်လုပ်မှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးချဲ့ရန်ရှာဖွေနေသည် podcast စတူဒီယို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးများမှာမြို့လယ် Indianapolis ၌တည်၏။ ငါတို့ရုံးမှာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရှိရင်ထိုင်ပြီးမှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ Skype ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောနှောခြင်းသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
မင်းဟာငါ့စာဖတ်သူဖြစ်ရင်ငါ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုငါသဘောကျတာကိုငါသဘောကျတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးဝန်ဆောင်မှု directory ကိုဖွင့်ခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေမှုနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံမှာကျွန်ုပ်တို့၏ site ရှိမည်သည့်ဆောင်းပါးကိုမဆိုသင် ၀ င်ရောက်လျှင်ထုတ်ကုန်သို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံမှအကူအညီရနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်တစ်ခုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်သည်။ ငွေအနည်းငယ်သာထည့်လိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းပင်လွင့်ပါးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်းကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းရန်မည်သည့်နည်းလမ်းမျှမရှိခဲ့ပါ။ ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်ပျက်စေရန်ယခုအချိန်တွင်အခြား startup နှင့်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းသို့မဟုတ်လူအင်အားမရှိပါက၎င်းကိုအောင်မြင်စွာစတင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဲဒီမှာရလိမ့်မယ်
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ whitepapers များကိုပေါင်းစပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုအချို့ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကစာဖတ်သူတွေကိုစာဖတ်သူရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကနေသွားပြီးအစီရင်ခံစာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးနက်နက်နဲနဲလေ့လာခွင့်ရစေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါင်းစည်းမှုကိုတိုက်ရိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ပြီးချက်ချင်းပင်အချိန်ကုန်နေသောပြissuesနာများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း front-end ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလုပ်ဆောင်စဉ်တွင် backburner ပေါ်တွင်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Tags: 2015တုံမှုနှုန်းDK New MediaMarketing Podcastစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများအစည်းအဝေးအသစ်များအော်ဂဲနစ်အသွားအလာစာမျက်နှာအမြင်များsession တစ်ခုအတွက်စာမျက်နှာများsession ကြာချိန်အစည်းအဝေးများလူမှုရေးနောက်လိုက်များအသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုလေ့လာသူများဧည့်သည်များwebinar တက်ရောက်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်တစ်နှစ်